Cudurka Jadeecada oo Faro Baas ku Haya Degmada Sabo-wanaag: | hubaalnewspaper
Cudurka Jadeecada oo Faro Baas ku Haya Degmada Sabo-wanaag:
Hargeysa (Hubaal)- Wararka ka imanaya degmada Sabo-wanaag oo dhinaca koonfur-bari kaga beegan magaalada Hargeysa ayaa waxa ay sheegayaan in muddo laba toddobaad laga joogo uu ka dilaacay cudurka Jadeecadu, isla markaana ay jiraan dad tiro badan oo illaa haatan u geeriyooday xannuunkan.
Cudurkan jadeecada oo ka mid ah xanuunada sida deg-dega ah u faafa ama cudurada u baahan in si dhakhso ah wax looga qabto isla marka la arko, ayaa ilaa iyo hadda sida wararka ka imanaya degaanka Sabo-wanaag ay sheegayaan inaanay jirin cid dhinaca hay’adaha ku shaqada leh sida WHO iyo UNICEF oo wax gargaar ah ka gaystay dadkan uu cudurka jadeecadu faraha baas ku hayo.
Cumar Hugur Galab, waa Guddoomiyaha Degmada Sabo-wanaag oo khadka telifoonka kula soo xidhiidhay wargeyska Hubaal oo faahfaahin ka bixiyey heerka uu cudurka jadeecadu ka marayo degmada ayaa waxa uu sheegay inuu faro baas ku hayo xanuunku shacabka degen deegaanka Sabo-wanaag oo ay jiraan dhimasho iyo bukaan uu haleelay xanuunkani oo u jiifa waxan uu yidhi; “Muddo haatan laga joogo laba todobaad ayuu xannuunka jadeecadu ka dilaacay degmada Sabo-wanaag, waxana uu illaa iyo haatan dilay ilaa iyo shan caruur ah oo uu meelo kala duwan ku kala dilay,waxana jira hooyooyin iyo caruur faro badan oo u jiifa cudurkan.”
Guddoomiye Cumar waxa kale oo uu sheegay inay wasaaradda caafimaadku markii ay ka war heshay jiritaanka xanuunkan ay degmada u soo dirtay shan kooxood oo loogu talo galay inay fuliyaan talaal balaadhan oo degmada iyo nawaaxigeedaba laga fuliyey oo ay hada hawshiisii socoto,waxana uu u mahadnaqay wasaarada caafimaadka oo uu sheegay inay sidii waajibkeedu ahaa uga hawl-gashay la tacaalidda cudurkan.waxana uu yidhi. “wasaaradda caafimaadka aad baanu ugu mahad-naqaynaa waayo waxa ay noo soo dirtay shan kooxood oo talaal ka geysta la tacaalista cudurkan na asiibay, illaa iyo haatana muddo lix maal-mood ah ayaa ay shaqaalaha wasaaraddu hawsha talaalka ku jireen waxayna talaaleen dad tiradoodu gaadhayso ilaa afar kun oo qof (4000) intaa iyo in ka badanina wali way noo hadhsan yihiin tallaalistoodu”.
Waxa kale oo uu Guddoomiyaha Degmadu dhaliil iyo cambaarayn baahsan usoo jeediyey hay’adaha WHO iyo UNICEF oo uu sheegay inay aad uga gaabiyeen wax-ka-qabashada iyo la tacaalista xannuunkankan halista ah ee ka dilaacay degaanka Sabo-wanaag, isaga oo carrabka ku adkeeyey hay’adda WHO oo ay shaqdeeda tahay inay gargaar ka geysato cudurka jadeecada.
Dadweynaha ku dhaqan degmada Sabo-wanaag ayaa waxa ay la yaabanyihiin sababta ay xukuumaddu talaabo uga qaadi la’dahay hay’adaha ka gaabiyey hawlahoodii ay wadanka ugu xilsaarnaayeen iyaga oo waliba malaayiin lacag ah kusoo qaata mar walba mashaariic iyo hawlo aanay sidii loogu talo galay wax uga qabanayn.
Haddaba inkasta oo aynu mar walba maqalno tallaallo ay Wasaaradda Caafimaadku ka hirgeliso deegaannada Somaliland, haddana maaha dedeeladaasi kuwo midho dhal balaadhan oo la taaban karo soo saara waxana dhacda in ay soo noqnoqdaaan cudurada ay ku andacoodaan inay talaalidiisa iyo cidhib tiridiisa ku hawlan yihiin, cudurka jadeecaduna waxa uu ka mid yahay cudurada ugu badan ee wadanka sanad walba talaalidiisa lagu lumiyo malaayiin lacag ah.
← Golaha Guurtida oo Saaka la Horkeenayo Xeerkii Xaasaasiyada Abuuray ee Doorashada iyo Mudaneyaal ka soo Horjeeda oo HUBAAL waraysi siiyay
Ciidanka oo keydkoodii Biyaha ka soo Dhurtay Baraagihii Sool-joogto iyo Maygaagle + Cabsida soo food-saartay reer-miyigii weheshanayay Ciidanka →